Ny tena kristiana dia miaina amin’ny fahatsorana - Vaovao mahafaly ho anao - Miomana hihaona amin Andriamanitrao- vaovao malagasy
Ny tena kristiana dia miaina amin’ny fahatsorana
Vokatry ny fiparitahan’ny filazantsara sandoka izay mivoy ny fananankarena dia lasa voapoizina ny sain’ireo kristiana ankehitriny ka lasa niodina ny fahatsorana ho amin’ny aingitraingitra sy ny fisehoana ivelany.
Ny filazantsaran’ny fananankarena izay filazantsara sandoka dia mampianatra fa manankarena ny kristiana ary tokony hiseho sy hipozy fatratra ary tsy hiaina intsony anaty fahatsorana. Hafa ny fahantrana dia hafa ny fahatsorana, ny fahatsorana akory tsy midika fahantrana velively. Jesosy kristy dia feno voninahitra sy fahalebeazana kanefa tsy nataony zava-dehibe izany fa tanatin’ny fahatsorana tanteraka no nidinany tety an-tany, ary raha tety Izy dia tsy nihambo ho nanana voninahitra velively fa naneho fahatsorana, araka ny voasoratra hoe:
“ Aoka ho ao aminareo izao saina izao, izay tao amin’i Kristy Jesosy koa, Izay, na dia nanana ny endrik’Andriamanitra aza, dia tsy nataony ho zavatra hofikiriny mafy ny fitoviana amin’Andriamanitra, fa nofoanany ny tenany tamin’ny nakany ny endriky ny mpanompo sy ny nahatongavany ho manam-pitoviana amin’ny olona;” Filipiana 2. 5-7
Izany hoe ny fahatsorana koa dia fanekena hitovy amin’ny olon-drehetra, tsy fitadiavana fiavahana amin’ny maro fa fiarahana sy fanaovana ny tena ho toy ny olon-dehetra, toetra izay nanjavona tanteraka eo amin’ireo mpitondra fivavahana ary mifindra amin’ny olona entiny.
Vokatry ny modely ratsy napitain’ireo bishop sy mampianatra avy any ivelany, amerikana sy afrikana tatsimo ary afrikana koa dia miampita aty amin’ny kristiana Malagasy ny aingitraingitra sy ny tsy fitiavana ny fahatsorana intsony. Lasa ireny mpanompon’Andriamanitra ireny no alaina tahaka, ny paoziny, ny fiakanjony, ny fiteniny, ny fiarany, ny mombamomba azy rehetra, ahoana nefa ny voalazan’ny tenin’Andriamanitra? Ny tanjon’Andriamanitra dia ny anahafantsika an’i Kristy, ary mba ho tonga tahaka ny zanaka manoa isika.
“Aoka hanahaka ahy hianareo, dia tahaka ny anahafako an’i Kristy.” 1korintiana11.1
Mazava izany fa ny baikon’ny Ray dia itovizana amin’i Jesosy fa tsy ny mpanompon’Andriamanitra, misy koa mantsy ankehitriny ireo mivohy ny hoe couverture spirituelle izany hoe fakana tahaka sy fialofana ambanin’ny mpanompon’Andriamanitra, fampianarana izay avy amin’i Satana, ny hany modely tokana sy tokony arahina dia Jesosy irery ihany, ary raha misy ny zoky ampanahay dia hajaina izy ireny fa tsy tompoina sy andrianina akory ka haka ny toeran’i Jesosy.
Raha Jesosy kristy ary no modely dia ndeha hojerentsika ny toetrany:
Voalaza fa olona tsotra Jesosy, raha nisafidy fianakaviana andray azy ety an-tany ny Ray dia fianakaviana tsotra, mpandrafitra fa tsy mpanefoefo no nofidiany. Tanana anisan’ny kely sy madinika no notsongainy ary mandrampialany tety an-tany dia tanatin’ny fahatsorana Izy. Hoy ny voasoratra:
“Natao tsinontsinona sy nolavin’ny olona Izy; lehilahy ory sady zatra ny fahoriana, Ary tahaka izay tsy tian’ny olon-kojerena akory Izy; natao tsinontsinona Izy ka tsy mba nahoantsika.”Isaia 53.3
Raha amin’izao vanimpotoana iainantsika izao dia teny amin’ny toerana tsotra, niaraka amin’ny olona tsotra na tsorina avy hatrany fa ireo heverina mahantra no nahitana an’i Jesosy, tsy tany amin’ny hotel 5 étoiles, na restaurant mihaingitra, raha te itarara ny fahatsoran’i Jesosy isika dia hita amin’ny olona nifaneraserany, ny toerana nalehany nandritra ny fivahinianany tety an-tany izany. Raha hisambotra azy ny miaramila nialoha ny nanombohana azy dia tsy nahalala azy nohon’ny fahatsorany, fitoviany amin’ny rehetra ka nahatonga an’i Jodasy voatery nanoroka ho famantarana fa izy no Jesosy, raha olona be pozy tahaka ireo mpanompon’Andriamanitra ankehitriny Jesosy dia ho zavatra hafa no nitranga!
“Indro, izao ihany no hitako: nataon’Andriamanitra mahitsy ny olona, kanjo namorona sain-kafa maro izy.” Mpitoriteny 7.29
Amin’ny fiteny frantsay dia tsotra no ambarany amin’io hoe mahitsy io, izay mihitsy no nanaovan’Andriamanitra ny olona fa satana no namilivily azy araka ny voalaza hoe:
“Fa matahotra aho, fandrao ny sainareo ho simba hiala amin’ny fahitsiam-po sy ny fahadiovana amin’i Kristy, tahaka ny namitahan’ny menarana an’i Eva tamin’ny fahendreny.” 2korintiana11.3
Eo ihany koa dia fahatsorana na simplicité no ilazan’ny fiteny frantsay azy.
Ny kristiana araka izany dia nantsoina mba hiaina anaty fahatsorana, ary indrindra tsy hiaina anaty aingitraingitra. Ny aingitraingitra izay mifanohitra amin’ny fahatsorana dia fahotana araka ny voasoratra hoe:
“Aza mihevitra izay hiavonavonana, fa aoka mba ho zatra amin’ny fietrena hianareo” Romana12.16
Izany hoe ny kristiana dia olona tsotra, tsy mandeha amin’ny fisehosehoana ivelany, afaka mandeha bus tsara, miankanjo tsotra, mandeha amin’ny toerana tsotra, mifandray amin’ny olona rehetra, manatona ny olona rehetra satria toy izany ny mpampianatra azy dia Jesosy kristy izany, tsy anezaka sy iseho ho eny amin’ny toerana lafo vidy ka ankanjo sy fihetsika miraradraratra satria hoe kristiana, tsarovy ry kristiana fa ny harena dia ny fahatsorana ao am-po, tsy voavidy vola io ary tsy ho an’ny olona rehetra, ka io no tokony ampiavaka antsika mpino fa tsy ny pozy ivelany izay mahasondriana tokoa, ny tena mampalahelo aza dia betsaka ireo kristiana no mahatsiaro ho ory sy tsy voatahin’Andriamanitra nohon’ny tsy fahatakarany ireo fiara raitra, na akanjo raitra sy fanao miangitraingitra ampianarin’ny mpitondra fivavahana azy, aoka ho fantatsika fa ny fatahorana an’i Jehovah no fiandohampahendrena, ary manan-karena lavitra noho ireo tia sehoseho isika rehefa manana fo tsotra, miaina tsotra tahaka azy satria izy no tahafintsika!
FIVORIANA SY FAMPIANARANA : Alahady maraina @ 9 ora eo analanelan’ny « Ecole Française Ambohibao » sy ny « Collège Les bambinos », vavahady gris